﻿Download Windows 8.1 Ngwungwu Ihu Asụsụ (LIP) from Official Microsoft Download Center
AfrikaansAmpharicAssameseAzeri (Latin)BaskiBengali (Bangladesh)Bengali (India)CatalanCentral Kurdish - IraqDariFilipinoGalicianGujaratiHausaHindiIgboIkinyarwandaIrishisiXhosaisiZuluKannadaKazakhKhmerKiswahiliKonkaniKyrgyzMalay (Malaysia)MalayalamMalteseMāoriMarathiNepaliOnye AlbaniaOnye ArmeniaOnye BelarusOnye Bosnia (Latin)Onye GeorgiaOnye IcelandOnye Indonesia Onye LuxembourgOnye Macedonia (Bubu Yugoslav Repọbliki nke Macedonia)Onye Norway (Nynorsk)Onye Serbia (Cyrillic)OriyaPersianPunjabiPunjabi - Islamic Republic of PakistanQuechua (Peru)Scottish Gaelic - United KingdomSerbian (Cyrillic) - Bosnia and HerzegovinaSesotho sa LeboaSetswana (South Africa)Sindhi - Islamic Republic of PakistanSinhalaTajik - TajikistanTamilTatarTeluguTigrinya - EthiopiaTurkmen (Latin) - TurkmenistanUrdu - PakistanUyghur - ChinaUzbek (Latin)VietnameseWelshWolofYoruba
Ngwungwu Ihu Asụsụ nke Windows (LIP) na-enye ụdị nke atụgharịrị obere maka mpaghara nke Windows a na-ejikarị. Ka ị rụnyechara LIP ahụ, a ga-egosi ederede dị na ọkachamara, igbe ụbụbọ, menu, na isiokwu Enyemaka na Nkwado na asụsụ LIP. Ederede nke atụgharịrị ga-adị n’okpuru asụsụ nke Windows 8.1. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị zụtara ụdị nke Windows 8.1 nke Spanish, wee rụnye Catalan LIP, ụfọdụ ederede ga-egosi na Spanish. Ị nwere ike ịrụnye karịa otu LIP n'otu nyiwe asụsụ. Enwere ike ịrụnye Windows LIP n'ụdị Windows 8.1 niile.
Maka Ihe Sistemụ Chọrọ, pịa ebe a
Maka Ntuziaka Nrụnye Izizi, pịa ebe a
Pịa bọtịnụ Budata na ibe a iji malite nbudata ahụ, ma ọ bụ họrọ asụsụ ọzọ site na ndepụta ndotu ahụ.
Mee otu n'ime ndị a:
Iji malite nrụnye ahụ ozugbo, pịa Mee.
Iji chekwaa nbudata ahụ na kọmputa gị maka nrụnye ma emechaa, pịa Chekwaa
Maka Ntuziaka Ka Emechara Nrụnye, pịa ebe a
Maka Nsogbu Ndị Ama Ama, pịa ebe a